We Fight We Win. -- " More than Media ": www.moetheezun.org - အလံတခုလွင့်လိုက်ပြီ။
www.moetheezun.org - အလံတခုလွင့်လိုက်ပြီ။
အတုံးအရုံးပြိုကျနေတဲ့အထဲမှာ ရွတ်ရွတ် ချွံချွံ ခုခံနေတဲ့ဘလောက်- www.komoethee.blogspot.com
နောက်ထပ် Website အသစ်တခု www. moetheezun.org ကို ယနေ့စက်တင်ဘာ ၁၈ရက်နေ့နအဖ စစ်အာဏာရှင်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဘလော့များပါဝင်သလို လတ်တလောသတင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ သတင်းများ ဆောင်းပါးများ သီချင်းများ ဖြင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ပြီး ကဗျာ များ ၀တ္ထုများ ပါ တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းဆောင်းပါးများအပြင် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် နည်းလမ်းတွေကိုလည်း ရဲရဲ တွေး ရဲရဲရေး ရဲရဲ ဖေါ်ထုတ်သွားပါမယ်။အ တွေးတူမြင်တူခံစားချက်တူတွေလည်း ဒီနေရာမှာရင်ဖွင့်နိင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှ ကြည့်နိုင်အောင်လည်း သံမဏိတံတိုင်းလို ခိုင်ခံ့လှတဲ့ Domain names များ Mirror sites များဖြင့် ၀န်းရံထားကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
ဖေါက်ရဲ ရင်ဖေါက်စမ်း- ငါတို့မှာ security assessment team ရှိတယ် ဟေ့ ပျက်ရင် ပြန်တည်ဆောက်မယ်
ပိတ်ရင် ပြန်ဖွင့်မယ် တရားတဲ့နည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်မယ်...။
ဟုတ်တယ်... ကိုမိုးသီး အားပေးနေမယ်..ချ သာ ချ...
8 February 2009 at 09:01
Great......That is great.We were Myanmar....
25 June 2009 at 08:21
You are one of the hero for Burma.
Fight for burma.
You are hero of Burma.
Fourth Monkey said...
we are with you u moe thee!let's fight for burma!
ဒီမိုကရေစီ လို့ဖင်ကွဲအောင်အော်နေတာကလွဲလို့ကျန်တာ တခုမှ လူ့ စည်းကမ်း လူ့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့လူ၊ သင်္ကြန်ဓါတ်ပုံတွေကို ဘယ်သူ့ ဆိက ခိုးပြီး တင်ထားလဲ ဆို တာ ကို ၀န် ခံရဲတဲ့ သတိရှိရဲ့ လား၊ ကိုယ့်သတင်းသမားဆီက မဟုတ်ဘဲ သူများဓါတ်ပုံ ခိုးတင်ထားမိကြောင်း သူခိုး အလံလေးတခုပါ လွင့်တင်လိုက်ပါအုန်း ။
17 April 2010 at 06:35
နိုင်ငံအတွက် လုပ်နေတာဆိုတော့ အရမ်းအားရကျေနပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် အသားထဲ လောက်ထွက်တွေ..စီးပွားရှာ နိုင်ငံရေး သမားတွေနဲ. တော့ မပေါင်းမိပါစေနဲ.လို.ဆုတောင်းပါတယ်
နှစ် ပေါင်း ၂၀ ကျော် အော်နေတာ ဘာမှလည်း ထူးမလာသေးဘူး။ လှုပ်တောင်မလှုပ်ဘူး။ ထောက်ပံ့ထားတဲ့လူတွေအားနာစရာ
ကျနော်တို့ ကို လိုအပ်တဲ့အကူညီတွေ ပံပိုး ကူညီပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ လူအား ငွေအားပံ့ပိုးကူညီကြပါ။
ကိုမိုးသီးဇွန်း ခင်းဗျာဟာသနားစရာပါလား အင်တာနက်သူတောင်စားလေးနော်
အစ အလယ် အဆုံးကောင်းမှာလည်း
လွင့်ထူခြင်းကိုစလိုက်သလို သတင်း ဆောင်းပါးတွေကိုလည်း အမြဲ update ဖြစ်နေအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါလေ
maung nyo's uncle said...
Moe Thee! Are youareal man??? You cannot do anything like others, Peter Linn Pin and Thee Lay Thee members. You should shut your mouth.
29 September 2011 at 18:34